सिनेमा समिक्षा : घामपानी
‘जात्रै जात्रा’ रिलिज पोस्टपोन्ड, सुटिङ फेरि रोकियो
काठमाडौंमा श्रृंखलाले बाँडिन् खुशि : फोटो कथा
‘बुलबुल’ टीजर : दुई पात्र स्थापना प्रयत्न
अनमोल फिचर्ड ‘क्याप्टेन’ गीत लन्च : भिडियो
फिल्म हलमा कर अफिसको ‘रियल टाइम’ निगरानी सुरु
हलिउडभन्दा पहिल्यै काठमाडौंमा, ‘आक्वाम्यान’को नेपाल पर्खाइ
घरमा रिलिजपूर्व ‘सयकडा दश’ले थाइल्यान्डदेखि विदेश टुर थाल्ने
कमेडी प्याक्ड ‘चौकादाउ’ ट्रेलर रिलिज
किम्फमा ‘अ थाउजन्ड गल्र्स लाईक मी’ सर्वोत्कृष्ट
दयाहाङको ‘आप्पा’ जेठ २४ मा
16th December 20180‘जात्रै जात्रा’ रिलिज पोस्टपोन्ड, सुटिङ फेरि रोकियो
15th December 20180काठमाडौंमा श्रृंखलाले बाँडिन् खुशि : फोटो कथा
15th December 20180‘बुलबुल’ टीजर : दुई पात्र स्थापना प्रयत्न
By Bisnu Sharma on	 15th April 2017 समिक्षा
दीपेन्द्र लामाले फिल्मलाई समिक्षक आँखाबाट हेरे । यसपटक निर्देशकीय कोणबाट कथा भनेका छन् । उनको दृष्टिकोणमा आफू तामाङ युवक हुनुको जैविकता पनि मिसिएको छ । यसले उनलाई कथा वाचन गर्दा सामाजिक प्रक्रियामा इमान्दार बन्न मद्दत पुगेको छ ।
यसअघि जातिय कथामाथि बनेका फिल्ममा समाज, जात, संस्कृति र भूगोल अध्ययन थिएन । सामाजिक प्रक्रियाको चित्रणमा अभाव थियो । घामपानी त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त छ । जनजाति निर्देशकले निर्देशन गर्दा आदिवासित्वको वैज्ञानिक चित्रण हुने होइन । प्रश्न कन्टेन्टमाथि को कति इमान्दार हुने भन्ने हो, चाहे त्यो बाहुन नै किन नहोस् ।
पौने दुई घन्टा लामो घामपानीले प्रेममा जातिय सहिष्णुताको सन्देश दिन्छ । जातिय र क्षेत्रीय राजनीतिले टाउको उठाएको बेला घामपानीको विषयगत सन्देश सशक्त छ । दीपेन्द्रले संयोगान्त अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धको न्यारेटिभमा दृश्यभाषाको सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झाएका छन् । निर्माता, लेखक, निर्देशकदेखि अधिकांश क्रिउ नै व्यक्तिगतरुपमा जनजाति भएपनि फिल्म एक्टिभिज्मबाट मुक्त छ ।
फिल्मले दयाहाङ राई (फूर्वा) र तारा (केकी अधिकारी)माथि फन्को मार्छ । काठमाडौंको पढाइ सकाएर पूर्वी नेपालस्थित गाउँ फर्किएकी ताराको पुनर्मिलन स्थानिय स्कुलको शिक्षक फूर्वासँग हुन्छ । उनीहरु दुबैजना बाल्यकालिन साथी र छिमेकी हुन् । सम्बन्ध अघि बढ्दै जाँदा प्रेममा पर्छन् । गाउँमा सरुवा भएर आएको प्रहरी अफिसर (अंकित खड्का)ले तारालाई मन पराउन थाल्छ । अनि द्धन्द्ध सुरु हुन्छ । उक्त अन्तरजातिय प्रेम सफल होला वा नहोला ?
यसको केन्द्रिय द्धन्द्ध अन्तरजातिय प्रेम हो । निर्देशक स्वयम तामाङ भएकैले उनले मुन्धुम संस्कार, लिम्बु भूगोलको भाषा, संस्कृति, रितिरिवाजदेखि सुक्ष्म चारित्रिक पक्षलाई दृश्यमा उतारेका छन् । बाहुन र तामाङबीचका द्धन्द्धात्मक सम्बन्धको जटिलता, हार्दिकतालाई उनले चेस खेलमार्फत विम्वको रुपमा बुनेका छन् । चेसको एकातिर बाहुन छ जो खेलमा झेली गर्छ र हार्न मान्दैन बरु खेल नै छाडेर जान्छ । चेसको अर्कोतर्फ तामाङ छ जो सोझो छ र खेलको नियममा कटिबद्ध रहन्छ । गाउँमा मोटर लैजाँदा उत्पन्न हुने झगडालाई स्थानिय राजनीतिक जटिलता र दृश्य सेटिङसँग चित्रण गर्न खोजिएको छ ।
कथा वाचनमा निर्देशक इमान्दार हुँदाहुँदै पनि त्यसले लय गुमाएको छ । नुसेन्स र प्रक्रियालाई सहि ट्रीटमेन्ट गर्दागर्दै पनि घामपानी व्याकरणका धेरै पक्षबाट कमजोर बन्न पुगेको छ । अर्थात, घामपानी सिनेम्याटिक भाषाको प्रयत्नभन्दा धेरै घटना र परिस्थितीहरुको मोन्टाज मात्र हो । ती घटना कारण र प्रभावहरुको स्वभाविक घर्षणबाट होइन कि बाह्य इभेन्टहरुबाट सिर्जिएका छन् । यसो हुनुमा पुरै फिल्मलाई ससपेन्स तुल्याउन खोज्ने लेखकीय नियत जिम्मेवार छ ।
जब लेखकले ससपेन्सलाई अन्त्यमा मात्र खुलाउने नियत राख्छ, फिल्मको मध्यम भागको यात्रा कृत्रिम बन्ने खतरा ज्यादा हुन्छ । दीपेन्द्र स्वयम पटकथा लेखक समेत भएकाले फिल्ममा उनको निर्देशकीय पक्षभन्दा लेखकीय पक्ष हावी छ । लेखक हावी हुँदा फिल्म परिणाम उन्मुख (रिजल्ट ओरिएन्टेड) बनेको छ । निर्देशक प्रभावशाली भएर सिनेम्याटिक इफोर्ट गरिनु जरुरी थियो । जसले केन्द्रिय द्धन्द्धलाई कमजोर तुल्याएको छ भने फिल्म अन्यौल सोचको उत्पादन बनिदिएको छ ।
घामपानीलाई एक वाक्यमा सिनेम्याटिक प्रयत्नभन्दा पनि पत्रकारिताको रिपोर्ताज शैली उन्मुख न्यारेटिभ मान्न सकिन्छ जहाँ सूचना र इभेन्टको संग्रह त हुन्छ तर, दृश्यको एस्थेटिक भ्यालु हुँदैन । सायद, निर्देशकको व्यक्तिगत मल्टिडायमेन्सन यसमा जिम्मेवार भयो वा बजारको दबाबमा उनले आफूलाई सिर्जनात्मक आत्मसमर्पण गराए ।
कथासँग आवश्यकै नपर्ने इभेन्टलाई राख्दा फिल्म लम्बिएको छ । सम्पादन गर्दा यस्ता त्रुटी धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । सम्पादकीय प्रयत्नमा इमान्दारिता देखिँदैन । निर्माता समेत रहेका छायांकार शैलेन्द्रध्वज कार्की सिनेम्याटिक डेप्थ बुझ्ने प्राविधिक पनि हुन्, उनले भूगोल स्थापनामा प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो ।
दयाहाङ राई (फूर्वा) र केकी अधिकारी (तारा) फिल्मका प्राण हुन् । उनीहरुको जीवन्त अभिनयले फिल्म इन्गेज अवश्य तुल्याएको छ । तर, हाफटाइम पछाडि तारा पात्रलाई पुरै किल गरिएको छ । तारा पात्रसँगको भावनात्मक सम्बन्ध दर्शकलाई महसुस हुँदैन । उसको महसुस के हो ? किन ऊ विद्रोही चरित्र होइने ? किन चुपचाप विहेको कुरा मान्छे ? मण्डपबाट दुलाहलाई पुलिस चौकी लैजाँदा किन मौन छे ? फिलिङ्स के हो ? फूर्वालाई पक्राउ गरेर लगेपछि दुलही के सोच्छे ? उसको आँखबाट न्यारेसन प्रयत्न गरिएन । अन्य पात्रको वरपर घुम्ने मात्र किन बनाइयो ? जसले क्राफ्टको ठूलै पात्रप्रति अन्याय भएको छ ।
तारा पात्रलाई भावनाविहिन तुल्याइएर फिल्मलाई पुरुषवादी कोणबाट मात्र भन्ने प्रयास जस्तो लाग्छ । जसले गर्दा घामपानी इमान्दार प्रयत्न हुँदाहुँदै अन्यौल सोचको अन्यौल उत्पादन बनिदिएको छ । यद्यपी, तामाङ र बाहुन युवायुवतीबीचको प्रेमकथा हेर्न मन छ भने घामपानी तपाईंका लागि योग्य हुनसक्छ ।
सिनेमा : घामपानी
कास्ट : दयाहाङ राई, केकी अधिकारी, अंकित खड्का
निर्देशक : दीपेन्द्र लामा
फिल्म समिक्षा : बियोन्ड द क्लाउड्स